Maqaal; Magaaladaydii Baan Nacay. Qalinkii (Cabdullaahi Cabdi Muuse -YamYam-) – Saraar Media
Home›Articles›all articles›Maqaal; Magaaladaydii Baan Nacay. Qalinkii (Cabdullaahi Cabdi Muuse -YamYam-)
meeshaan Gaalkacyo ah, qof damiir leh oo og in lagu jiro qarnigii 21-aad kuma noolaan karo, qof og aduunku meeshuu marayo iyo horumarka ay gaareen dadyowga caalamku kuma noolaan karo. Magaalo sanad walba dagaal u diyaara, magaalo labo maamul-goboleed mar ay isku dagaalaan iyo mar labo qabiil oo biyaha hoostooda iska arkay isku dagaalaan u dhaxaysa bay noqotay.
Gaalakacyo waxaa ka socda Filim-kii Hollywood ka ahaa ee la oran jiray ” A million ways to die in the west”. Filimkaan waxaa lagu jilay magaalo la yiraahdo Old Stump ee state-ka Arizona ee wadanka Maraykanka, sanadka laga matalayo waa 1882. waxaa looga sheekaynayaa nolosha ay reer galbeedku soo mareen iyo waxyaabo badan. Magaaladaan waxa ka jirta nolol dad ku noolaadaan tan u liidata, dadku waxa ay u dhimanayaan xanuuno la daawayn karo, gaajo iyo dadka oo la iska dilo si bilaa sharci ah – Eyda magaalada baa cunaysa dadka wadooyinka yaal ee la iska dilay ama wax laga hortagi karo u dhintay-. Atooraha filimkaan wada isagu dadka magaalada waxa uu ka horeeya boqol sano oo waa sida qof nool dhamaadkii qarnigii labaatanaad, aad buu ula yaabanyahay nolosha magaaladan ka jirta iyo dhimashada xad dhaaf ka ah.
Reer Gaalkacyo filimkii bay magaca qaybta danbe badaleen, oo waxa ay ula baxeen ” A million ways to die in the Gaalkacyo”.
Haddii aadan filimkas daawan waxaan kugu soo dhawaynaynaa isagoo toos u socda, kana socda magaalada Gaalkacyo. Filimkaas markaan waxaa wada Puntland, Galmudug iyo Alshabaab, ilaa iyo hadda cid atoore ka ah waan garan la’ahay, maadaama ay umuuqdaan inay dhamaantood uultimada dhimanayaan. Atoore dhintayna waa waali cas! qof la iska dilo, dagaal laba qabiil ama laba maamul goboleed magaalada bartankeeda ku dhex mara Gaalkacyo ugu imow, dabadeed la hishiiyo markay dhintaan boqol qof ugu yaraan, sanad kadibna waa dagaal iyo hishiis been ah, eedadiin u sheega anagay nagu ciyaarayaan. Waayadan waxaaba dheer dagaalada qaraxyo.
Bulshada Gaalkacyo waxay iska qaban la’yihiin siyaasi-xume, oday-dhaqameed-xume iyo Ganacsade-xume dantooda wata, balaayadoo dhan iyagay kasoo bilaabataa. Ganacsade-xume waa kan ugu daran, rasaasta ay geel jiruhu isku laynayaan buu u gadaa- geel jiraha tolkiisa ah-, magaaladana waxaa udagan afar xaas laba bakhaarna waa uu ku leeyahay. Hoobiye kugu dhac. asaga weeye wax ugu hor qaxa ama ay dhibta ugu darani gaarto. Anigu kolayba afar naagood baa tiriyee xitaa midi iima dagana Gaalkacyo, bakhaarna warkiisaba daa xitaa sandaqad iigama furna, ee ganacsadahaas oo kale baan magaalada uga tagayaa.
qofku markuu haysto amni sidoo kale uusan ka fakarayn wixii uu cuni lahaa, qofkaasi waxbuu qabsankaraa ilaa xad hadduusan is liidin. Hadda oo aan qoraalkan qorayo labo malayshiyo-beeleed baa isku hor fadhiya Koonfur-galbeed magaalada. Nolosha ma waxaan ku dhamaystaa geel jire islaynaya sanad walba inaan ku dhex jiro, yixaas ha cunee, mise waxaa dhahaa “ﺃَﺭْﺽُ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻭَﺍﺳِﻌَﺔً ﻓَﺘُﻬَﺎﺟِﺮُﻭﺍ ﻓِﻴﻬَﺎ”. kolayba anaa og waayadan Gaalkacyo rajo laga naawili mayee, toban sano kadib masheegin. Meeshaan waa inaan ka dhaqaajiyaa aduunyada ilaahayna dhinac ka galaa.